Ihlathi lokuKhusela iSebe
Kwindawo eselunxwemeni lwaseRoche ebhengezwe njengeLifa leMbali yiUNESCO, ikwindawo enabemi abambalwa, yasendle kwaye phantse engaziwayo iOceania del Polonio resort. Ezinye iikhabhinethi, i-inn encinci, ihlathi le-eucalyptus kunye nemithi yepineyini kunye nolwandle oluvulekileyo elwandle lushwankathela i-topography yale ndawo.
Ukuba sele uyazi ezinye ii-spas zaseRochens, uya kuzibuza malunga nokukhanya kombane. EOceania kukho umbane, kodwa sekunjalo, iinkwenkwezi zikhazimla ngokungathi ubusembindini webala.
Ibekwe phakathi kwezona ndawo zokuchithela iiholide iLa Pedrera kunye neCabo Polonio, kwaye iikhilomitha ezilithoba kuphela ukusuka kule yokugqibela. Indlela yomhlaba idibanisa i-Oceanía del Polonio kunye nekhilomitha engama-255 yendlela yesizwe yeshumi.
Imisebenzi yePolonium eOceania
Nangona eyona nto inomtsalane kukuzola kwaye abakhenkethi beza kufuna ukuphumla, eOceania del Polonio kukwakho ukuzonwabisa: ukukhwela ihashe, ukuhambahamba ehlathini kunye nephenyane lihamba kwindawo emanzi. Imililo ebusuku, ukuloba kunye ne-hang-gliding flights nazo zihlala zikhona.
Kwi indawo ungakwazi ukutyelela reserve ingonyama ulwandle kunye Cabo Polonio lighthouse, ukuze nazi, ukuzulazula Valizas Stream, i Rocha Lagoon, hamba-hamba ekhokelwa ngokusebenzisa Ombúes Forest ubudala, yaye uye phambili umganyana, ungatyelela i Fort yaseSanta Teresa, okanye undwendwele iLa Paloma, ebonelela ngazo zonke iinkonzo zolwandle.
Siya kufumaneka kwindwendwe ukusuka mzuzu wokufika, kulo lonke ixesha lokuhlala. Ngobuqu okanye ngayo nayiphi na indlela yonxibelelwano.